Nhau - Chigadzirwa Kuongorora - Rutivi rweVatengi
1. Mhando yepamhepo zvinodiwa pakushandisa humburumbira: yakachena uye yakaoma yakadzvanywa mweya inofanirwa kushandiswa.Mumhepo haifanirwe kunge iine organic solvent yemafuta ekugadzira, munyu, gasi rinokanganisa, nezvimwewo, kuitira kudzivirira humburumbira, vharafu yakaipa chiito.Pamberi pekumisikidza, yekubatanidza pombi inofanirwa kuputirwa zvizere uye kugezwa , usaunze guruva, chip, kuvhara mabhegi zvidimbu uye nezvimwe zvisina kuchena mu cylinder, vharafu.
2. Zvinodiwa kwenzvimbo yekushandisa ye cylinder: Munzvimbo dzine guruva rakawanda, madonhwe emvura uye madonhwe emafuta, padivi tsvimbo inofanirwa kuve yakagadzirirwa telescopic inodzivirira pakavha.Kune materesikopu anodzivirira haagone kushandiswa, masirinda ane mhete yakasimba isina guruva kana masirinda asina mvura anofanirwa kusarudzwa.Kana iwo ambient tembiricha yesirinda uye tembiricha yepakati inodarika -10 ~ 60 ℃ ine magineti switch, anti-kutonhora kana kupisa kupisa matanho inofanirwa kutorwa. Mune nharaunda yesimba remagineti, iyo humburumbira ine otomatiki switch yemasimba magineti munda inofanira kusarudzwa. haifanire kushandiswa mumhute inoparadza kana mumhute inoputira neringi.
3. Mafuta emagetsi:Mafuta-akafukidzwa masilinda anofanirwa kuve akagadzirwa nemafuta emafuta mudziyo ane inoyerera kuyerera. Iyo cylinder haina kuzorwa nemafuta. Inogona kushandiswa kwenguva yakareba nekuti girizi inotangirwa kuwedzerwa musilinda.Iyi cylinder inogona zvakare kushandiswa kumafuta, asi kana mafuta apihwa, iwo mafuta haafanire kumiswa.Mafuta anofanirwa kupihwa ne turbine kwete. 1 (ISO VG32). Usashandise mafuta, mafuta ekurukisa, nezvimwewo, kudzivirira kuwanda kwekuwedzera kweNBB nezvimwe zvisimbiso.
4. Cylinder mutoro: Iyo pisitoni tsvimbo kazhinji inogona chete kutsigira axial mutoro.Dzivisa kushandisa lateral uye eccentric mitoro pane iyo pisitoni tsvimbo.Kana paine mutserendende mutoro, iyo pisitoni tsvimbo pane inotungamira chishandiso inofanirwa kuwedzerwa, kana sarudza giraidhi tsvimbo humbwa, nezvimwe. mutoro wedhairekitori shanduko, pisitoni tsvimbo kumberi kumagumo uye mutoro * shandisa mubatanidzwa unoyangarara Nenzira iyi, hapazovi nekupwanya mune chero chinzvimbo cherwendo. Kana iyo humburumbira iri pasi pesimba rinorema, yekumisikidza tafura yesirinda ichave iine matanho ekudzivirira kusununguka, kushanduka uye kukuvara.
5. Kuiswa kwesilinda: Paunenge uchiisa yakasungirirwa humburumbira, iyo axis yemutoro uye pisitoni tsvimbo inofanira kunge yakafanana.Kana uchiisa mhete kana materu emagetsi, ita shuwa kuti iyo inofamba ndege yesirinda uye kuzungunuka kwemutoro zviri mune imwe ndege.
6.Kumhanya kugadziridza kwesirinda. Kana vharuvhu yekumhanyisa ichishandiswa kugadzirisa kumhanya kwesirinda, vharuvhu yaro yekuvharira inofanirwa kuvhurwa zvishoma nezvishoma mune yakazara yakavharwa mamiriro uye kugadzirisa kune iyo yaunoda kumhanya.Rongedza huwandu hwekutendeuka kuti usapfuure * iyo nhamba yekutendeuka. iro tenzi wekukiya.
7.Bhafa yesirinda: Kana simba rinofamba re cylinder risingakwanise kunyudzwa nesilinda pachayo, iyo yekumisikidza (yakadai seye hydraulic buffer) kana buffer loop inofanirwa kuwedzerwa kunze.
Nezve mashandiro otomatiki esirinda:ye otomatiki oparesheni chishandiso, zviyero zvinofanirwa kutorwa mumushini kana dunhu kudzivirira kuumbwa kwemuviri uye kukuvara kwechigadzirwa nekuda kwekusaita kushanda uye humburumbira chiito kutenderera.Road rate: Kubva pakufunda kwesirinda inomhanya hunhu, Zvakaoma kuona chaiko kubuda yesilinda yemagetsi. Saka mukudzidza kwekuita uye kubuda kwesilinda, humburumbira hunoshandiswa kune pfungwa yemutoro chinhu. Cylinder load factor beta inotsanangurwa se beta = humburumbira dzidziso uye simba rekuburitsa chaiko mutoro F * 100% humburumbira Ft (l3-5), iyo chaiyo mutoro humbowo inotariswa neicho chaicho chinoshanda mamiriro, kana ikasimbiswa iyo cylinder theta, mutoro wehuremu inotsanangurwa nedzidziso yegasi humburumbira inogona kutsanangurwa, simba rekubuda, iro rinogona kuverenga humburumbira. Kune impedance mutoro, senge humburumbira hunoshandiswa mukukanganisa kwepneumatic, kurodha hakuburitse inertia simba, general Select load factor beta is 0.8; Kune inertial mutoro, senge cylinder inoshandiswa kusundira iyo workpiece, mutoro unoburitsa inertial simba, mutoro chiyero chekukosha chinotevera: <0.65 kana humburumbira ichifamba nespidhi kumhanya, V <100 mm / s; <0.5 Kana iyo humburumbira ichifamba nepakati kumhanya, V = 100 ~ 500mm / s; <0.35 apo iyo humburumbira yekumhanya-mhanya kufamba , V> 500 mm / s. SMC rinoshandura chinja chinzvimbo: SMC remagineti chinja rinonyanya kushandiswa kudzora kufamba kwemaindasitiri michini, chimurenga reshiyo renji ye1: 1 kusvika 1: 150; Iyo yakazara saizi yakakodzera kusangana munzvimbo diki, iyo drive shaft uye giya dhiraivha shaft ari yakagadzirwa nesimbi isina chinhu, iyo giya uye yekutyaira bushing inogadzirwa otomatiki lubricated thermoplastic zvinhu, ese marudzi ezvinhu uye zvinhu zvine yakanaka yekupfeka kuramba, uye iyo michina ine yakanaka isina mvura uye isina guruva performance.The Magineti switch inonyanya kushandiswa kudzora kuita kwe michina yekumaindasitiri, senge kusimudza, nezvimwe. Iyo shanduko reshiyo inotangira pa1: 1 kusvika 1: 9,400; Mahara emiganhu switch inoiswa ne2, 3, 4, 6, 8, 10 kana 12 switch kana inononoka switch uye yakapinza CAM PRSL7140PI. Zvimwe zvinhu uye chimurenga ratios zviripo pakukumbira Ita mirairo yakasarudzika. * Chiyero chechimurenga chi1: 9, 400.Zvinhu zvese nezvidimbu zvinopesana nengura, mvura uye guruva.